काँग्रेसमा राजीनामा दिनेको लर्को, अध्यक्षको राजीनाका विषयमा पनि बहस ? — Motivatenews.Com
काँग्रेसमा राजीनामा दिनेको लर्को, अध्यक्षको राजीनाका विषयमा पनि बहस ?
नयाँ दिल्ली – लोकसभा चुनावमा हार बेहोरेपछि भारतीय कँग्रेसको विभिन्न प्रदेशका अध्यक्षहरुले भटाभट राजीनामा दिन लागेका छन । काँग्रेसको पकटका रुपमा रहेको कर्नाटक, ओडिशा र उत्तरप्रदेशका काँग्रेस पार्टी अध्यक्षहरुले हारको जिम्मेवारी लिँदै पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।
यता केन्द्रमा पनि राजीनामाका विषयमा बहस सुरु भएको छ । कार्यसमिति बैठकमा राहुल गान्धीले हारको जिम्मेवारी लिँदै पार्टीको अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिने प्रस्ताव गरेका छन् । तर उनको प्रस्तावलाई कार्यकारिणी सदस्यले अस्वीकार गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
बैठकमा पार्टीकी पूर्व अध्यक्ष सोनिया गान्धी, मनमोहन सिंह, गुलाम नबी आजाद, प्रियंका गान्धी वाड्रासमेत कयौँ नेता उपस्थित रहेका छन् ।
बैठकमा लोकसभा चुनावमा बेहोरेको हारको समीक्षा गरिनेछ । विशेष गरेर मध्यप्रदेश, राजस्थान र छत्तीसगढ जस्ता क्षेत्र जहाँ पार्टीले पाँच महिनाअघि विधानसभा चुनावमा जित हासिल गरेको थियो । त्यस्तै, कर्नाटक विधानसभा चुनावमा बेहोरेको हारको पनि मन्थन हुनेछ ।